एनआरएनए कोरियाको केन्द्रिय अधिवेशन र स्यालको कथा - Fonij Korea
लेखक: श्रमदिप चौलागाई	| प्रकाशीत मिति: September 5, 2019
लोक कथा भर्सेस फटाहा कथा । लोक कथा, मतलव परापुर्व कालदेखी श्रुतिको मध्यामबाट नया पुस्तामा हस्तान्तरण हुदै लोकमा चलेका कथा । ठ्याक्कै परिभाषा चाही के हुन्छ अनविज्ञ नै छु । त्यस्तै एउटा लोक कथा र त्यसको आबरणमा बनेको अर्को कथा बताउदै छु । स्यालको हुइ्यासग जोडिएका दुइ वटा लोक कथाहरु छन् । एउटा लोक कथा अर्को लोक कथा सगै जोडेर बनाईएको फटाहा कथा । दुइ वटै कथामा बैज्ञानिक तथा सामाजिक पुष्टी पनि पाइदैन तैपनी यदा कदा कथाहरु प्रसङ्गमा आइरहन्छन ।
दिउसो सिकारको सिलसिलामा छुट्टिएका स्यालका झुण्डहरु रातचाही समुह मै बिताउन चाहान्छन । त्यहि छुट्टिएका स्यालहरुले साझमा साथीलाई बोलाउन समुहको एउटा स्यालले ह्वा गरेर आवाज निकाल्छ अनि टाढा भएका स्यालहरुले त्यहि आवाजलाई पच्छाएर ह्वा ह्वा गरिदिन्छन । यहि साझमा हुने स्यालहरुको ह्वा सग आधारित पहिलो कथा ।
कथा यस्तो छ । स्यालको राजाले साझमा ह्वा गरेर म राजा हु भनेको रे त्यो सुनेर अरु स्यालहरुले चाही ह्वा ह्वा गरेर हो हो भनेको रे । थाहा छैन त्यो पहिला कराउने राजा हो कि होइन अनि त्यो पछी कराउने प्रजा हो कि होइन । तर, कथा निरन्तर चलिरहेको छ । ठ्याक्कै यहि कथामा जोडेर आउछ अर्को फटाहा कथा । कथा यस्तो छ । त्यो सुरुमा कराउने राजा स्यालले ह्वा गरेर म राजा हु भन्दा त्यसको दुई वटा सिंग निस्किन्छ रे । त्यही बेलामा फ्याक्क हानेर झार्न सक्यो भने स्यालको सिंग भेटिन्छ रे । त्यसको मुल्य करोडौ हुन्छ रे । बनझाक्रिको हड्डि , गाईको गौलोचन , नागमणी जस्तै ठगहरुको बजारमा स्यालको सिंड पनि एउटा गतिलो नाम हो ।
पहिलो कथा जसले बालबालिकाहरुलाई मनोञ्जन प्रदान गर्ने काम गर्दछ तर हानी पुर्याउदैन । अनि अर्को कथा जसले मान्छेहरुलाई लोभमा पारेर ठग्ने काम गर्दछ । अब प्रसंग जोडौ एन आर एन ए कोरियाको केन्द्रिय अधिवेशन अनि त्यसका प्रत्यासीहरुको चुनाबी प्रतिबद्धताको । उमेरद्धवारका प्रतिबद्धताहरु हेर्दा लाग्छ उनिहरुले जिते भने भोली नै स्यालको सिगं झार्ने छन् । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने पुरानो कार्यसमितीमा बसेर केही थान फ्यानह्विइजम वाला राम्यान चपेस्टिक भाच्न नसकेकाहरु त झन अगराखकै मुडा भाच्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको गरै छन । यस्तो बेलामा कोरियामा रहेका नेपाली समुदायले सच्चिकै नै एन आर एन ए लाई बलियो र नेपालको बिकासमा योगदान पुर्याउने पुल बनाउन कोशिष गर्ने हो भने उमेरद्धवारी घोषणा गर्नेहरुको प्रतिबद्धता सगै तिनीहरुको बिगतलाई पनि ध्यान दिएर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकी मोही मथेर घिउ निस्दिैन ।
हामीले हरेक उमेरद्धारलाई प्रस्न गर्न हिच्किचाउनु हुन्न । कोहिले तपाईसग भोट माग्दै गर्दा तपाईलाई भोट किन ? तपाईले जित्दा एन आर एन कोरियाले नया नेता मात्र पाउछ कि ? नेपाली समुदाय र नेपालले पनि केही पाउछ ? आम नेपालीको पैसाले उठाएको नेपाल हाउसलाई मन्द बिष पिलाएर ब्रमनालमा सुताउने को हो ? अब त्यसलाई के गर्नु हुन्छ ? एन आए एन ए को ब्याच लगाएर नेपाली कै पैसा खाएर फरार हुने अपराधीको बिरुद्धमा बोल्न एन आर एन ए को मुखमा कसले मुखमा पिडालु अड्काएको थियो ? केहि लेख्न कसले हात समातेको थियो ? सत्यको वकालत गर्न आफु सत्यमा रहनु पर्छ । आफु झुटको खामो माथी चडेर तल हेर्दामा अग्लो हुन सकिएला तर सत्यको पथमा रहन सक्दैन ।
हामीलाई पनि थाहा छ , यहा सबै ब्यबसाय तथा काम गर्न केही पढ्न आएका नेपाली छन् । घास खाएर बाच्ने घोडाको दोस्ती घास सग हुनै सक्दैन । यदि भयो भने घोडा मर्छ । ब्यापारको धर्म हो नाफा । नाफा भएन भने ब्यापार जिवित रहन सक्दैन तसर्थ ब्यापारीहरुले आफ्नो ब्यापारलाई लक्षित गरेर कुनै क्रियाक्लाप गर्छ भने त्यो उसकोब्यापारी धर्म भित्र रहने कुरा हो । तर कुनै संघ सस्थाहरुलाई ब्यापार बढाउने उदेश्यका साथ संचालन गरियो भने ब्यापारीलाई त फाइदै होेला तर सस्था चाही मर्दाे रहेछ त्यसको नमुना नेपाल हाउस काफी छ ।
यो पत्तिकारले केही एन आर एन ए का प्रत्यासी हरुसग कुरा गर्दा के पाए भने अधिकांसले त बिधान पनि हेरेका रहेनछन भने एन आर एन ए स्थापना गर्नु को मुल उदेश्य थाहा पाउने कुरै भएन । एन आर एन ए स्थापना गर्नु को मुल उदेश्य भनेकै बिदेशमा रहेका नेपालीको सिप ज्ञान र पुजी नेपालमा लगाई देशको बिकासमा योगदान पुर्याउने भन्ने नै हो । त्यसको लागी एन आर एन ए ले नेपाल सरकार र बिदेशमा रहेका नेपाली बिच पुलको काम गर्ने हो । नेपालको आर्थिक बिकासमा टेवा पुर्याउने सभा सम्मेलन अन्तरक्रिया र अनुसन्धान गर्ने हो । नेपालमा लगानीको लागी अनुकुल क्षेत्रहरुको बारेमा नेपाल सरकार सग समन्वय गरि बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई जानकार गराउने र नेतृत्व गर्ने हो । प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउ यो हो , प्रतिबद्धता खोज्नु पर्ने ठाउ यो हो । यता तिर धेरै प्रत्यासीहरुको नत प्रतिबद्धता देखीन्छ न त त्यस्तो बुझाई नै । अन्तयामा एन आर एन ए सस्था नेपालीकै सस्था हो । यसलाई बलियो बनाउन हामी सबै लागौ । सहि नेतृत्व चयन गर्न सहयोग गरौ । फेरी पनि दोर्याउछु स्यालको सिगं हुदैन वा निस्किदैन । स्यालको सिगं समात्न कसैले प्रेरित गर्ला , याद गरौ एन आर एन ए कोरियालाई बलियो बनाउन आफ्नो पुर्ण स्वबिवेक प्रयोग गरौ ।